Madaxwayne Mustaf Cagjar iyo Axmed Shide oo mar kale Khilaaf cusub ka dhex Qarxay. – Xeernews24
Madaxwayne Mustaf Cagjar iyo Axmed Shide oo mar kale Khilaaf cusub ka dhex Qarxay.
24. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Kulama Joogta ah oo tan iyo Galinkii dambe ee shalay ay magaalada Addis ababa ku lahaayeen madaxwayne Mustafe cagjar iyo Gudomiye Axmed Shide, ayaa Fashil iyo is af garanwaa ku dhamaaday kadib markii Labada masuul ku kala Aragti duwanaadeen Qabashada shirwaynaha xisbiga ee mar badan dib loo dhigey.
Madaxwayne Mustaf waxaa ka Go’an in sidda ugu dhakhsaha badan loo Qabto shirwaynihii xisbiga si meesha looga saaro Habacsanaanta dhan kasta ah ee ku Habsatay Hogaanka sare ee xisbiga iyo xukuumada, waxaana xubin kamida Teamka madaxwaynaha uu war baahinta u sheegay in Gudomiye Axmed Shide uu si cad ugu Gacansaydhay Qorshaha madaxwayne Mustaf.
Kulankii ugu dambeeyay ee Labada masuul dhex-maray oo dhacay Fiidnimadii xalay ayaa laysku mari waayay waxaana Axmed Shide uu ku adkaysanayaa inuu isagu masuul kayahay Qabashada shirwaynaha, ayna Waajib tahay in isaga iyo xubnaha lashaqaynaya looga dambeeyo xiliga shirwaynaha iyo Ajandihiisa.
Kadib dood dheer oo aan laysugu Garaabin ayay Labada masuul ku kala dhaqaaqeen kulankoodii xalay waxaana lagu wadaa in madaxwayne Mustaf uu kasoo baqoolo magaalada Addis ababa, iyada oo aan Laysla meel dhigin Geedi socodka shirwaynaha xisbiga oo mudo kudhowaad 6-bilood ah soo Jiitamayay.
Sidda laga war hayo labadan masuul waxay horey iskugu qabteen arinta xisbiga waxaana soo kala dhex galay Raysalwasaarahe Dr,Abye Ahmed oo ugu yaraan ku guulaystay in u dhex dhigo heshiis caado ah oo aan dhidibo adag ku taagnayn.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/shide.jpg 140 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-24 08:08:092019-03-24 08:08:09Madaxwayne Mustaf Cagjar iyo Axmed Shide oo mar kale Khilaaf cusub ka dhex Qarxay.
DAAWO SAWIRRO: Wararkii ugu dambeeyay weerarka Muqdisho. Aduunka weli kama dhamaan dadka uu damiirkooda bani‘ aadanimo nool ya...